Lataliyaha Kuliyada MHS | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Dhalinyarada iyo waayeelka, ma taqaanaan Phil Trout? La-Taliyahayaga Kulliyaddu waa xiriir muhiim u ah qorshayntaada dugsiga sare kadib iyo raadinta kuleejka. Isagu wuxuu shaqsiyan ku soo kormeeray boqolaal xarumood wuxuuna rajeynayaa inuu kula wadaago fikrado muhiim ah.
Badanaa waxaa la yiri raadinta kuleejka waa ciyaar la qabanaayo, mana ahan abaalmarin lagu guuleysto. Waxaan kaa caawin doonaa inaad hesho taam sax ah. Phil Trout, Guy Kuleejka
Mudane Trout wuxuu leeyahay xirfad sare oo ah La-Taliyaha Kulliyadda, haddana wuxuu ku jiraa sanadkiisii 15-aad ee Minnetonka. Wuxuu hore u soo noqday Agaasimihii La-talinta Kulliyadda ee Mounds Park Academy (St. Paul), Shattuck-St. Mary's (Faribault) iyo Akadeemiyada Illinois iyo Xisaabta iyo Sayniska. Waxa kale oo uu ka shaqeeyey gelitaanka kuleejka ee Jaamacadda Minnesota iyo Kulliyadda William iyo Mary. Isagu waa Madaxweynihii hore ee Ururka La-talinta Ogolaanshaha Kulliyadda ee Minnesota, wuxuuna ka soo shaqeeyey Golaha Minnesota ee Golaha.
Wuxuu u noqday Madaxweynaha Ururka La-talinta Ogolaanshaha Kulliyadda (NACAC) intii lagu jiray sanad dugsiyeedkii 2015-2016.
Si aad ballan u sameysato, fadlan emayl u soo dir email-ka collegeguy@minnetonkaschools.org ama
Imtixaanka Galitaanka Kuleejka
Su'aalo ma ka qabtaa imtixaannada laga galo kuleejka?
Maxaan u qaataa PSAT ?
Waa maxay faraqa u dhexeeya ACT iyo SAT?
Goorma ayaan qaataa ACT / SAT?
Immisa jeer ayaan qaataa ACT / SAT?
Sideen ugu diyaargaroobi karaa imtixaannada laga galo kuleejka?
Su’aalahani way kala duwan yihiin iyadoo ku saleysan arday kasta iyo xaaladdiisa. Waa fikrad fiican inaad kala hadasho lataliyahaaga imtixaanka.
Wixii macluumaad guud ah, fadlan booqo bogga Imtixaanka iyo Qiimaynta .
Xogta Dugsiga Sare
Seminar Sare oo ku saabsan Macluumaadka Codsiga Kuleejka (pdf)
Seminar Sare oo ku saabsan Macluumaadka Codsiga Kuleejka (YouTube)
Macluumaadka Raadinta Kuleejkaaga
Dhammaan barnaamijyada waxaa lagu bixiyaa iyada oo loo marayo GoToWebinar, haddii aan si kale loo sheegin. Bandhigyo ama qoraallo gacmeedyo iyo xiriiriyeyaal websaydh la duubay ayaa hoos lagu dhajinayaa markii la heli karo.
Taariikhda Waqti Dhacdo
Talaado, Ogast 25 3 galabnimo
Webinar: Galitaanka Kuleejka 101
Eeg Ogolaanshaha Kulliyadaha 101 Soo Bandhigida (pdf)
Halkan Ka Daawo Qirashada Kulliyadaha 101 Webinar (YouTube)
Isniinta, Ogast 31 3 galabnimo
Webinar: Ogolaanshaha Kuleejka ee Xulista - Shan Talooyin Muhiim ah
Eeg Soo Bandhigida Ogolaanshaha Kulliyadda (pdf)
Daawo Webinar Aqbalaada Kulliyadda (YouTube)
Arbaco, Sebtember 9 12 pm
Khamiis, Sebtember 17 3 galabnimo Webinar: Gelitaanka Jaamacadaha Calanka Dadweynaha Weyn
Eeg Ogolaanshaha Soo Bandhigida Jaamacadaha Calanka Dad Weyn (pdf)
Eeg Ogolaanshaha Jaamacadaha Calanka Dadweynaha Webinar (YouTube)
Khamiis, Sebtember 24 7 galabnimo
Webinar: Barnaamijka Waalidka Sare
Eeg Bandhigga Barnaamijka Waalidka Sare (pdf)
Daawo Barnaamijka Webinar ee Waalidiinta Waaweyn (YouTube)
Isniinta, Sebtember 28 3 galabnimo
Webinar: Ogolaanshaha Kuleejka iyo Ciyaaraha Ardayda
Eeg Ogolaanshaha Kulliyadda iyo bandhigga Ciyaaraha Ardayda (pdf)
Daawo Qirashada Kulliyadda iyo Websaydhka Ciyaaraha ee Ardayga (YouTube)
Isniinta, Oktoobar 26 4 galabnimo
Webinar: Aqoon isweydaarsi ku saabsan Gargaarka Dhaqaalaha iyo Deeqaha waxbarasho
Soo-bandhigayaasha: Brian Lindeman, Kaaliyaha Madaxweyne Ku-Xigeenka Ogolaanshaha iyo Gargaarka Maaliyadeed ee Machadka Macalester; Phil Trout, Lataliyaha Kuleejka ee Dugsiga Sare ee Minnetonka.
Arag soo bandhigida Gargaarka Dhaqaalaha iyo deeqaha waxbarasho (pdf)
Ka daawo websaydhka Gargaarka Dhaqaalaha iyo Deeqaha (YouTube)
Khamiis, Dec. 17 N / A
Kulleejada Websaydhka Kulliyadda: Khibradaha Kulliyadda ee gobolka ka baxsan
Minnetonka Grads waxay la wadaagaan khibradahooda kaqeybgalka kulliyadda ama jaamacadda gobolka ka baxsan.
Ka daawo Webinar ka baxsan gobolka-dawladeed (YouTube)
Isniinta, Dec. 21 N / A
Kulleejada Webka ee Kulliyadda: Khibradaha Minnesota
Minnetonka Grads waxay la wadaagaan waaya-aragnimadooda kaqeybgalka kuliyadda ama jaamacadda Minnesota.
Daawo Webinar Kuleejka Minnesota (Youtube)
Khamiis, Jan. 7 N / A
Kulleejada Websaydhka Kulliyadda: Nolosha Kadib Dugsiga Sare ee Minnetonka
Isniinta, Febraayo 1 7 galabnimo Barnaamijka Waalidka Yar-yar: Laad-u-saar Hannaanka Raadinta Kuleejka
Eeg bandhigga Barnaamijka Waalidka Yar (pdf)
Daawo Barnaamijka Waalidka Yar (Video)